Ahoana ny fomba hanampiana ny menio fizarana iOS amin'ny fampiharana YouTube | Vaovao IPhone
Ny fampiharana YouTube, na dia anisan'ny be mpampiasa indrindra amin'ny fitaovantsika aza izy ity, Manolotra antsika ny menio raha ny fizarana ireo horonantsary izay mihoatra ny estetika mahazatra an'ny iOS, miaraka amin'ny menio mainty sy fotsy, miaraka amina litera kely sy sary masina izay manahirana antsika ny mitady izay rindranasa tianay hizara ny atiny ho hitanay amin'ny olon-kafa. Tsy fantatro ny momba anao, fa izaho manokana, isaky ny omeko ny safidiny fizarana, mijanona aho mandritra ny segondra vitsy araka ny nantenako ny tabilao fizarana iOS mahazatra fa tsy ity menio taloha izay noforonin'i Google ho an'ny fampiharana horonantsary ity.
Soa ihany, ity olana famolavolana kely amin'ny fampiharana YouTube ofisialy ity dia manana vahaolana mora foana, raha toa ka mpampiasa Jailbreak izahay. Na dia efa lany andro aza i Google amin'ny fampiasana an'io menio mahazatra Android io kokoa noho ny iOS, dia afaka mampiasa ilay tweak Native YouTube Share, tweak maimaim-poana hita ao amin'ny repo BigBoss ary izany dia ahafahantsika mampiasa ny menio iOS mahazatra ao anatin'ny fampiharana YouTube rehefa mizara ilay horonantsary izay jerenay amin'ny olon-kafa.
Vantany vao nametraka ity fanovana ity izahay, tsy manolotra safidy azo amboarina ho antsika ary mandeha miasa izy io raha vantany vao miverina ny fitaovana. Amin'ny maha-fampiharana manova ny menio fizarana ao amin'ny YouTube dia ilaina ny miasa mba hametrahantsika ny fampiharana ofisialy. Vantany vao manokatra ny rindranasa sy mitady horonan-tsary izahay dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra fizarana raha te hahita ny fomba nanovana ny fomba fanehoana ny safidin'ny fizarana antontan-taratasy. Manomboka amin'ity fotoana ity dia ho hitantsika ny menio fizarana mahazatra iOS, avelantsika ankilabao ny menio fizarana taloha izay tonga amin'ny fomba fanao ao amin'ny fampiharana YouTube.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Ahoana ny fomba hanampiana ny menio fizarana iOS amin'ny fampiharana YouTube
TaiG koa dia miasa amina jailbreak ho an'ny iOS 9.2 ary ho avy tsy ho ela